GOVERNORA ANALAMANGA : NANOLOTRA VARY 5 TAONINA SY VOAMAINA 2 TAONINA
On jan 29, 2020 5 500
Manao tohi-vakana ny fanolorana fanomezana eny anivon’ny BNGRC ho fanampiana ireo traboina vokatrin’ny rotsak’orana nisesy farany teo. Tonga nanatitra ny anjara-birikiny ho fanampiana ny traboina ny Gouvernora Analamanga, Hery Rasoamaromaka, omaly. Vary 5 taonina sy voamaina 2 taonina no natolony teny amin’ny foibein’ny BNGRC .
“ Ho firaisam-po amin’ny maha Malagasy dia manana adidy ny hanampy ireo mpiray tanindrazana traboina ny faritra Analamanga ary tonga dia porofoina amin’ny alalan’ny asa izany ka tonga nanolotra ny fanampiana ara-tsakafo ho azy ireo », hoy ny governora. Nanamafy, Atoa Rasoamaromaka Hery fa tsy azo atao ny fanaovana fanangonam-bola na ny » Telethon » ataon’ny vondron’olona na fikambanana mba ialana amin’ny mety fanararaotana.
Vonona hiara-dia amin’ny fizarana atao eny amin’ny faritra ny Gouvernora ho an’izay hizara fanomezana ifotony , ary natao ho mangaraharaha avokoa izany .Ho hentitra araka izany ny fanaraha-maso ny fizarana ny fanampiana.
Nanentana Malagasy ihany koa ny Gouvernora Analamanga Hery Rasomaromaka ny iara – hisalahy hifanampy ho famonjena ireo traboina eran’ny Nosy .